काठमाडौँ । नेपाल स्वयंसेवी रक्तदाता समाजको तेस्रो महाधिवेशन आगामी चैत २४ र २५ गते काठमाडौँमा हुने भएको छ । देशका विभिन्न २१ जिल्लामा सञ्जाल विस्तार गरेको उक्त समाजले सम्बन्धित जिल्लाबाट १०५ प्रतिनिधि,...
भोजपुर जिल्ला अस्पतालमा प्रसूति शल्यक्रिया पुनः सञ्चालनमा
भोजपुर । भोजपुरमा रहेको एकमात्र जिल्ला अस्पतालको प्रसूति शल्यक्रिया सेवा करिब दुई वर्षपछि पुनः सञ्चालनमा आएको छ । शल्यक्रियाका लागि आवश्यक दक्ष जनशक्ति तथा औषधिको अभावका कारण बन्द रहेको प्रसूति सेवा ...
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा श्रेष्ठले आजबाट अवकास पाउँदै
काठमाडौं । स्वास्थ्य सेवा विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक डा विनोदमान श्रेष्ठले अवकास पाएका छन्। पदवहाली गरेको १० दिनपछि सेवाबाट अवकास पाएको हुन् । महानिर्देशकमा नियुक्त भएको ९ दिनपछि फागुन ११ गते विभ...
नवलपरासीमा कुष्ठरोगका ८८ नयाँ बिरामी फेला
नवलपरासी । नवलपरासी (बर्दघाट–सुस्ता पश्चिम) र नवलपरासी (बर्दघाट –सुस्ता पूर्व) जिल्लामा कुष्ठरोग उन्मूलनका लागि गरिएको ‘सर्च अभियान’ मा कुष्ठरोगका नयाँ ८८ बिरामी फेला परेका छन् । खोजी अभियानअन्र्तगत ...
के मोवाईलको प्रयोगले क्यान्सर हुनसक्छ ? जानिराखौं
काठमाडौं । तपाईको मोबाइल फोनबाट निस्कने रेडिएसनले कति हानि गर्छ ? यो विकिरणले ट्युमरको खतरा हुन्छ ? यसबाट कसरी बच्ने ? यी प्रश्नहरूमाथि वैज्ञानिकहरूले वर्षौंदेखि खोज गरिरहेका छन् तर यसको कुनै सटीक जवा...
रसुवा। ग्रामीण दूरदराजमा लुकेका कुष्ठरोगीको खोजी कार्य शुरु भएको छ । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय रसुवा अन्तर्गत कार्यरत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले घरदैलो अभियान शुरु गरी कुष्ठरोगीको खोजी भइरहेको महि...
सुर्खेत । प्रदेश नं ६ का मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मध्यपश्चिम क्षेत्रीय अस्पताल सुर्खेतलाई प्रदेशकै नमूना अस्पताल बनाइने बताएका छन् । अस्पतालको १२ औँ स्थापना दिवसका अवसरमा वीरेन्द्रनगरमा आयो...
काठमाडौं । नेपालमा क्यान्सर रोगी कति छन् भन्ने कुनै आधिकारिक तथ्यांक छैन । क्यान्सरको उपचार प्रदान गर्ने अस्पतालहरुमा आउने रोगीको संख्या पछिल्ला वर्षहरुमा बढिरहेको तथ्यांक छ । यसले मुलुकमा क्यान्सर र...
इलाम । इलाममा यो वर्ष अढाई लाख बढी जनसंख्यालाई हात्तीपाइले रोगविरूद्धको औषधि खुवाइने भएको छ । जनस्वास्थ्य प्रमुख जीवनकुमार मल्लले दुई वर्षदेखि माथि ७० वर्षसम्मका दुई लाख ६६ हजार ८३३ जनालाई फागुन १२ दे...
काठमाडौँ । महामृत्युञ्जय योग केन्द्र, विजयचोक, माइती नेपाल, गौशालाले तीनदिने ‘स्वस्थ्य मुटुका लागि मुटु व्यवस्थापन कार्यशाला’ आयोजना गरेको छ । शुक्रबारबाट कार्यशालामा केन्द्रका संस्थापक योगी पूर्ण पिय...
हरेक पाँचमध्ये एक जनामा मानसिक समस्या
काठमाडौँ । नेपालमा हरेक पाँच जनामध्ये एक जनामा मानसिक स्वास्थ्यसम्बन्धी समस्या देखिएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभाग, प्राथमिक तथा पुनर्जागरण महाशाखाद्वारा पहिलो पटक आयोजित “अन्तर्राष्...
डोल्पा । त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाअन्तर्गतका पाँचवटै स्वास्थ्य चौकीमा औषधि अभाव भएको छ । त्रिपुरा स्वास्थ्य केन्द्र त्रिपुराकोट, पहाडा, लिकु, सुँ र ल्हाँ स्वास्थ्य केन्द्रमा औषधिको चरम अभाव भएको छ । प...
प्रेम दिवसमा शुभकामनाः फोक्सोलाई माया गरौं
काठमाडौँ । वायु प्रदूषणको विरुद्धमा साझा संकल्प लिने प्रयत्नका साथ सञ्चालन भइरहेको साताव्यापी अभियान मास्कमाण्डुको आज ‘‘मास्कमाण्डु हैन हामीलाई काठमाडौँ चाहिन्छ’ भन्दै समापन गरिएको छ । प्रणय दिवसका अ...
रगत परीक्षणबाट प्रारम्भिक चरणमै पत्ता लगाउन सकिन्छ ८ प्रकारका क्यान्सर
काठमाडौं । रगत परीक्षणबाट प्रारम्भिक चरणमै धेरै प्रकारका क्यान्सर पत्ता लगाउन सकिने एक अध्ययनले देखाएको छ। रगत परीक्षणबाटै शरीरको कुन भागमा क्यान्सर भइरहेको छ भन्नेसमेत प्रारम्भिक चरणमै पत्ता लगाउन सक...
काठमाडौँ । मातृ मृत्युको मुख्य कारण ‘इक्लामसिया’ रोक्न प्रमुख मानिएको ‘म्याग्नेसियम सल्फेट’ नामक औषधिको खरिद हुन नसक्दा अभाव भएको छ । परिवार स्वास्थ्य महाशाखाका आमा सुरक्षा कार्यक्रमकी कम्युनिटी नर्स...
राजविराजमा गर्भवती तथा सुत्केरीले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्ने माग
राजविराज । स्वास्थ्य सेवाअन्तर्गत गर्भवती तथा सुत्केरी महिलाले निःशुल्क सेवा पाउनुपर्ने पाँचसूत्रीय माग राख्दै जनस्वास्थ्य कार्यालयमा बिहीबार ज्ञापनपत्र बुझाइएको छ । स्वास्थ्य अधिकार तथा सूर्तीजन्य न...
महोत्तरीमा स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमको शुभारम्भ
महोत्तरी । स्वास्थ्य बीमा सञ्चालन गर्नका लागि अस्पताललाई व्यवस्थित गरिनु आवश्यक रहेको पूर्व स्वस्थ्य मन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बताएका छन् । आज महोत्तरीको बर्दिबासमा जिल्लाको स्वास्थ्य बीमा दर्ता का...
लायन्स क्लबका संस्थापकको जन्मदिनमा निःशुल्क आँखा शिविर
काठमाडौं । लायन्स क्लब अफ इन्टरनेशनलका संस्थापक मेल्भिक जोन्सको १३९ औँ जन्मोत्सवका अवसरमा नुवाकोट विदुर नगरपालिकाको खड्गभन्ज्याङमा निःशुल्क आँखा शिविरको आयोजना गरियो । लायन्स क्लब अफ युनाइटेड सेन्टर,...
काठमाडौँ । सामान्य चिकित्सामा प्रवीणता प्रमाणपत्र तह अध्ययन गरेकालाई निःशर्त सम्बन्धित विषयको माथिल्लो तह एमबिबिएस अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग स्वास्थ्य सहायकले गरेका छन् । स्वास्थ्य सहायकहरुले विगतमा...